Isi Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova na Brooklyn Dị na New York
KEYS TO FAMILY HAPPINESS Kwadebe Ụmụ Gị Ndị Dị Afọ Iri na Ụma Ịghọ Ndị Dimkpa
Betel Brooklyn Agbaala Otu Narị Afọ
Ụlọ Nche | 2009-05-01
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Ebe Obibi Betel 122-124 Columbia Heights
AFỌ 1909 bụ afọ dị mkpa na New York City. E mepere Àkwà Mmiri Queensboro, bụ́ nke jikọrọ obodo Queens na obodo Manhattan, e mepekwara Àkwà Mmiri Manhattan, bụ́ nke jikọrọ obodo Manhattan na Brooklyn.
Ọ bụkwa afọ dị Ndịàmà Jehova mkpa. Tupu mgbe ahụ, Charles Taze Russell, onyeisi oche nke Watch Tower Bible and Tract Society, bụ́ ụlọ ọrụ iwu kwadoro nke Ndịàmà Jehova ji arụ ọrụ, ahụla na e nwere ike ịgbasa ọrụ ikwusa ozi ọma Alaeze Chineke. (Matiu 24:14) O kweere na isi na Pittsburgh, Pennsylvania, bufee isi ụlọ ọrụ Society na Brooklyn, New York, ga-enye ezigbo aka n’ime nke ahụ. Na 1908, a malitere ịkwabede maka ibufe ya ebe ahụ, e mechakwara bufee ya n’afọ sochiri ya.
Olee Ihe Mere Anyị Ji Kwafee Brooklyn?
Ndị na-eduzi ozi ọma anyị na-ekwusa n’oge ahụ maara na ibipụta okwu Baịbụl ndị anyị na-ekwu n’akwụkwọ akụkọ bụ ụzọ magburu onwe ya isi gbasaa eziokwu Baịbụl. N’ezie, ka ọ na-erule n’afọ 1908, okwu Baịbụl Russell na-ekwu kwa izu apụtawala n’akwụkwọ akụkọ iri na otu, ndị na-agụkwa ya dị narị puku mmadụ anọ na puku abụọ.
N’agbanyeghị nke ahụ, Russell dere, sị: “Ụmụnna anyị ndị maara banyere akwụkwọ akụkọ . . . mesiri anyị obi ike na ọ bụrụ na e bipụtawa okwu Baịbụl anyị na-ekwu kwa izu [n’obodo ebe e nwere ọtụtụ mmadụ] o nwere ike ime ka okwu ahụ gazuo United States dum; na n’ime otu afọ e nwere ike inwe ọtụtụ narị akwụkwọ akụkọ ndị ga na-ebipụtachi ya anya.” N’ihi ya, a malitere ịchọ ebe kacha mma a ga-anọ gbasaa ọrụ ikwusa ozi ọma ahụ.
Okwu Russell ndị e bipụtara n’akwụkwọ akụkọ
Olee ihe mere e ji họrọ Brooklyn? Russell kwuru, sị: “Mgbe anyị kpechara ekpere, anyị niile kpebiri na Brooklyn, N.Y., bụ́ ebe e nwere ọtụtụ mmadụ . . . na ebe a na-akpọ ‘Obodo Chọọchị Juru,’ ga-abụ ebe kacha mma ịnọ rụọ ọrụ owuwe ihe ubi ahụ n’ihi ihe ndị a.” Ihe ndị a rụpụtarala gosiri na ihe ahụ o kwuru bụ eziokwu. N’ime obere oge, puku akwụkwọ akụkọ abụọ nọ na-ebipụta okwu Russell.
E nwere ihe ọzọ mere e ji họrọ New York. Ka ọ na-erule 1909, e mepeela alaka ụlọ ọrụ anyị na Great Britain, Germany, nakwa n’Australia, ka na-akwadokwa imepe ya n’ebe ndị ọzọ. N’ihi ya, ọ bụ ihe amamihe inwe isi ụlọ ọrụ ụwa niile anyị n’obodo nwere ọdụ ụgbọ mmiri na ọtụtụ okporo ụzọ na ụzọ ụgbọ okporo ígwè.
Olee Ihe Mere E Ji Kpọọ Ya Betel?
117 Adams Street (1927 ruo taa)
E mepere isi ụlọ ọrụ mbụ nke Watch Tower Bible and Tract Society mgbe afọ 1880 gachara, n’Allegheny (ebe dịzi na Pittsburgh), Pennsylvania. N’oge ahụ, a na-akpọ ya Ụlọ Baịbụl. Ka ọ na-erule afọ 1896, e nwere mmadụ iri na abụọ na-arụ ọrụ n’ụlọ ahụ.
Ma, mgbe e bufere isi ụlọ ọrụ anyị na Brooklyn n’afọ 1909, a malitere ịkpọ ebe obibi ọhụrụ nke ndị na-arụ ọrụ n’isi ụlọ ọrụ ahụ Betel. * Olee ihe mere e ji kpọwa ya Betel? Onye nwebu ụlọ Watch Tower Society zụrụ na 13-17 Hicks Street bụ ụkọchukwu a ma ama bụ́ Henry Ward Beecher, a na-akpọkwa ụlọ ya ahụ Betel Beecher. Anyị zụkwara ụlọ ebe Beecher bibu, nke dị na 124 Columbia Heights. Ụlọ Nche (Bekee) nke March 1, 1909, kọrọ, sị: “Ọ bụ nnọọ ihe ịtụnanya na anyị zụtara ebe bụ́bu Betel Beecher, zụtakwa ụlọ ebe o bibu. . . . Anyị ga-akpọ ebe obibi ọhụrụ ahụ ‘Betel,’ kpọọkwa ọfịs na ụlọ ezumezu ọhụrụ ahụ, ‘Ụlọikwuu Brooklyn’; a ga-eji aha ndị a dochie aha mbụ ahụ bụ́ ‘Ụlọ Baịbụl.’”
Taa, a na-akpọ ụlọ ndị e wusarala nke ukwuu dị na Brooklyn na n’ebe abụọ ọzọ dị na New York State, bụ́ Wallkill na Patterson, ma ụlọ obibi, ụlọ obibi akwụkwọ, na ọfịs ndị dị na ha, Betel. N’ezie, e nweela ebe obibi Betel n’otu narị mba na iri na atọ n’ụwa. Ndị na-arụ ọrụ na ha bụ ihe karịrị puku ndị ozi iri na itoolu bụ́ ndị na-enye aka n’ikesa ozi Baịbụl.
Anyị Na-eji Obi Ụtọ Anabata Ndị Ọbịa
E nyefere Jehova ụlọ ndị ahụ e wuru na January 31, 1909. Monday, September 6, 1909, bụ Ụbọchị Nnabata Ndị Ọbịa na Betel. Ọtụtụ narị Ndị Mmụta Baịbụl, bụ́ aha a na-akpọ Ndịàmà Jehova mgbe ahụ, bịara gagharịa n’ụlọ ahụ. Ọtụtụ n’ime ha si ná mgbakọ Ndị Kraịst ha nwere na Saratoga Springs bịa, bụ́ ebe dị ihe dị ka narị kilomita atọ na iri abụọ n’ebe ugwu New York City. Charles Taze Russell ji aka ya nabata ndị ọbịa ahụ ma kelee ha. *
A ka na-anabata ndị ọbịa na Betel. N’ezie, ihe karịrị iri puku mmadụ anọ na-abịa eleta Betel Brooklyn kwa afọ. Betel Brooklyn ka na-arụ ọrụ dị mkpa n’ime ka ihe ndị metụtara Alaeze Jehova na-aga n’ihu, bụ́ nke na-ewetara ọtụtụ nde mmadụ ngọzi.
Ebe obibi akwụkwọ dị na Wallkill
Ogige Ụlọ Akwụkwọ Patterson
^ para. 11 Okwu Hibru bụ́ “Betel” pụtara “Ụlọ Chineke.” Na Baịbụl, Betel bụ obodo a ma ama dị n’Izrel. Ọ bụ naanị Jeruselem bụ obodo a kpọrọ aha karịa ya na Baịbụl.
^ para. 14 Ị chọọ ịghọtakwu akụkọ banyere Ndịàmà Jehova, gụọ akwụkwọ bụ́ Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, peeji nke 718-723, bụ́ nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
Olee Ihe Ị Maara Banyere Watch Tower Bible and Tract Society?
E hiwere ụlọ ọrụ iwu kwadoro bụ́ Zion’s Watch Tower Tract Society n’afọ 1884, bụ́ nke a na-akpọzi Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ihe mere e ji hiwe ya bụ ịgbasa eziokwu Baịbụl, karịsịa, iji akwụkwọ e biri ebi agbasa ya. Taa, Watch Tower Bible and Tract Society ka bụ otu n’ime ụlọ ọrụ ndị iwu kwadoro Ndịàmà Jehova ji arụ ọrụ gburugburu ụwa. *—Ndị Filipaị 1:7.
Watch Tower Bible and Tract Society ebipụtala Baịbụl na akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl na narị asụsụ anọ na iri asaa na atọ. O bipụtala Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ na Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst nde otu narị na iri nde ise n’asụsụ iri asaa na abụọ. E wezụgakwa Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ, Society ejirikwala ígwè obibi akwụkwọ ya bipụta ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ka e bipụta nsụgharị Baịbụl ndị a: American Standard Version, The Bible in Living English, The Emphatic Diaglott, Linear Parallel Edition nke Holman sụgharịrị, King James Version (ma Mbipụta nke Ndị Mmụta Baịbụl), na The New Testament Newly Translated and Critically Emphasized, Mbipụta nke Abụọ.
E wezụga ibipụta Baịbụl, n’ime naanị afọ iri gara aga, Ndịàmà Jehova emepụtala ihe ndị ọzọ karịrị ijeri iri abụọ, dị ka akwụkwọ, magazin, traktị, CD, DVD, na ihe ndị ọzọ e ji amụ Baịbụl. * Ebe a nọ mepụta, pịakọta, ma zipụ ihe ka ọtụtụ n’ihe ndị a bụ n’ebe obibi Betel ndị dị ná mba ndị dị ka Argentina, Australia, Brazil, Britain, Canada, Colombia, Finland, Germany, India, Ịtali, Japan, Korea, Mexico, Myanmar, Nigeria, Philippines, South Africa, Spen, na United States.
IHE NDỊ E WEPỤTARA NA
^ para. 21 N’afọ 2008, e nwere nde Ndịàmà Jehova asaa na otu narị puku na iri puku abụọ na anọ na narị anọ na iri anọ na atọ nọ na narị ala abụọ na iri atọ na isii. Ha nọ n’ọgbakọ dị puku otu narị na atọ, narị abụọ na iri isii na asaa.
^ para. 23 A naghị ere ihe ndị a ere. A na-eji onyinye afọ ofufo akwado ọrụ ịkụzi Baịbụl Ndịàmà Jehova na-arụ n’ụwa dum.